Erdogan: Isra’iil waa argagixiso ee Carabeey tallo mideysan baa lagaa rabaa. – Xeernews24
Erdogan: Isra’iil waa argagixiso ee Carabeey tallo mideysan baa lagaa rabaa.
11. Dezember 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Isra’iil ku tilmaamay dowlad argagixiso wuxuuna xukaamta carabta ugu baaqay inay la yimaadan ficil ku aadan aqoonsiga uu Trump Qudus ugu aqoonsaday caasimada Isra’iil.
Madaxweyne Erdogan oo maanta khudbad xasaasi ah ka jeediyay magaalada Sivas ee badhtamaha gobolka Anatolian ayaa si kulul uga hadlay qadiyada Qudus iyo ficilada xukumada Isra’iil.
“Isra’iil waa dowlad gumeysi oo argagixiso ah,Turkiguna qadiyada Qudus ku halayn mahayo caqliga dowlad maati lays ah,”ayuu yidhi Erdogan.
“Qudus waa nuurkii indhaheena,kuna halayn mayno damiirka dowlad caqligeedu noqday gumeysi iyo bililiqo.Waanu sii xoojinaynaa halgankaanaga anagoo ilaalinayna qaanuunka iyo dimuqraadiyada,” ayuu markale yidhi Erdogan.
“Falastiin waa la gumeystaa waana dulmane.Xaqiiqdii Isra’iil waa dowlad gumeysi waligeed ma aysan u hogaansamin qaraarada qaramada midoobay umana hogaansami doonto,” ayuu markale ku celiyay madaxweyne Erdogan.
Erdogan ayaa soo bandhigay qariirad muujinaysa sida Isra’iil uboobtay dhulkii Falastiin tan iyo 1947-dii.Wuxuu sidoo kale soo bandhigay sawir wiil 14 jir Falastiini ah oo indhaha ka xidhan ayna ku hareer sanyihiin askar Isra’iili ah.
“Fiiri sida argagixisadu ujiid jiidayaan wiilkan yarka ah ee 14 jirka ah ee indhaha ka xidhan,” ayuu yidhi Erdogan.
“Hadalka ka soo yeedhay Trump ee ku saabsan Qudus dhanka Turkiga waa waxba kama jiraan.”
“Waxaanu sii wadeynaa garab istaaga aanu garab taaganahay dadyowga dulman.Qadiyada Qudus o ah qibladaanadii ugu horeysay Waxaanu u adeegsan doonaa fursada kasta oo aanu heli karno.Waxaanu sameynay xidhiidho diblomaasiyadeed oo dhanka telefonka ah tan iyo kolkii go’aanka xumi uu ka soo baxay Mareykanka.Waxaan khadka telefoonka kula hadlay madax badan oo uu kamid yahay baadiriga Pope.Waxaan usheegay in qadiyadani aysan ahayn mid khuseysa Islaamka oo kaliya balse ay tahay sidoo kale mid lagu dhacayo xuquuqda masiixiyiinta,laakiin waa inaan si cad uqeexaa in talaabada Mareykanku qaaday ay tahay caqiido masiixiyiinta haysata madhabka Evangelistiga,”ayuu yidhi madaxweyne Erdogan.
Erdogan ayaa dunida Muslimka uga baaqay in si wadajir ah looga hortago go’aanka Mareykanka isagoo si khaas ah xukaamta carabta ugu dhiirigeliyay in mowqif mideysan ka qaataan arinta taagan.
“Kala qeybsanaanta iyo dhibaatada dhex taala dunida Muslimka ayaa Mareykanka usahashay in go’aan noocan oo kale ah uu qaato.Waxyaabaha ka dhacaya Ciraaq iyo Suuriya banaanka ayay yaalaan.Masar,Libya iyo Yemen iyaguna dhibaatooyin culus baa haysta.Arinta Qudus waxa ay muujinaysaa in dowladaha qaarkood ay ka faaideysteen xaaladaha jira,Muslim ahaan waa inaynu feejignaanaa,” ayuu hadalkiisii ku soo afmeeray madaxweyne Erdogan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/erdogan-qudus.jpg 426 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-11 09:44:412017-12-11 09:44:41Erdogan: Isra’iil waa argagixiso ee Carabeey tallo mideysan baa lagaa rabaa.
Itoobiya oo Mowqif lama filaan ah ka qaadatay Go’aanki Trump ee Qudus. Kalmaddi sheekh Cabdirahman Suuleyman Bashir ee ku saabsan Magaalada Qudus